६ सय ४९ बालबालिका बेपत्ता ! कसले कहाँ पुर्यायो ? — Imandarmedia.com
६ सय ४९ बालबालिका बेपत्ता ! कसले कहाँ पुर्यायो ?
काठमाडाै‌ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन सेवा १०४ मा ३ हजार ६ सय ५८ जना बालबालिका हराएको उजुरी परेको छ । जसमध्ये ३ हजार ९ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ भने ६ सय ४९ जना बालबालिका अझै बेपत्ता छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले अझै बेपत्ता रहेका बालबालिकाको खोजतलास भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बेवारिसे फेला परेका १ सय ९७ जना बालबालिकामध्ये १ सय ६ जनालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको र ९१ जना बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षणमा राखिएको बताए ।
परिषद्का निर्देशक धरेलले २०७७/७८ मा ३ सय एक जना बालक र ५४ जना बालिकाको सडकबाट उद्धार गरेर संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्ठापना गरेको जानकारी दिए । उनले २०७८/७९ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि आधार खडा गरिने बताए ।
उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परिषद्ले सडकमा आउने बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण सँगसँगै सडक बालबालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘Street to stadium, street to family/Street to skill training’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’
एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले तीन तहको सरकार हुँदा त्यो हटेको कार्यकारी अधिकृत धरेलले बताए । कतिपय पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट व्यवस्थापन गरे पनि कतिपयले नगरेको उनले बताए ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेर बालकोषको स्थापना गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाइँले स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बाल मनोविज्ञ राख्न पनि सङ्घले नै स्वीकृति दिनुपर्छ ।’ रातोपाटीबाट साभार